January 24, 2018 – Kalika Khabar
नेपाल सरकार माथी खनिय: सिलवाल
January 24, 2018 adminLeaveaComment on नेपाल सरकार माथी खनिय: सिलवाल
२०७४ माघ १० काठमाडौं । नेपाल प्रहरिका पुर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा ललितपुरबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा संसद नवराज सिलावाललाइ सर्वोच्च ले ईन्टरनपोल मार्फत समाउन आदेश दिएपछि सिलवाल भक्कानिएका हुन। बिगतको प्रहरी महानिरीक्षक काण्ड देखि नै असन्तुष्ट सिलवाल भन्छ्न अब त अति भयो! उनि भकानिदै टुइटरमा लेख्छ्न ` हे इश्वर! आइजे तेरो खुट्टामा महलम लगाइदिन्छु, कतिका […]
प्रदेश १ र २ बाट को-को भए राष्ट्रिय सभामा निर्विरोध ?
January 24, 2018 January 24, 2018 adminLeaveaComment on प्रदेश १ र २ बाट को-को भए राष्ट्रिय सभामा निर्विरोध ?
२०७४ माघ १० काठमाडौं । विभिन्न प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा उमेदवार दिएका केही उमेदवारहरु निर्विरोध भएका छ्न। निर्विरोध हुनेहरु प्रदेश न.१ बाट एमालेकी नैनाकला ओझा, काङ्ग्रेस कि सरिता प्रसाईं र माओवादीकि बिना पोखरेल निर्विरोध भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रदेश न.२ बाट ५ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन। माओवादीकि शसिकला दाहाल, काङ्रेसकी मुक्ताकुमारी यादव र फोरमकी […]
जापनमा पढ्ने पनि कमाउने पनि!
January 24, 2018 adminLeaveaComment on जापनमा पढ्ने पनि कमाउने पनि!
२०७४ माघ १० काठमाडौं । नेपाल सरकार शिक्षा मंत्रालयद्वारा स्वीकृति प्राप्त यस HELLO STUDENT consultancy ले तपाईको जापान जाने सपना, त्यो पनि जम्मा ६ लाख मा पुरा गर्दै छ ! School fee साथै १ वर्ष को आवास सुविधा पनि ! साथमा Part time Job Guarantee हाम्रा बिशेषताहरु:- – Free Language Classes – No Hidden Charge […]
विबेकशिल साझाले छान्यो काङ्ग्रेस उमेदवार
January 24, 2018 adminLeaveaComment on विबेकशिल साझाले छान्यो काङ्ग्रेस उमेदवार
२०७४ माघ १० काठमाडौं । बरिस्ठ अधिब्क्ता राधेश्याम अधिकारिलाइ काङ्ग्रेस प्रदेश न.३ बाट खुल्ला सदस्यको उमेदवार बनाएको छ। उनी काङ्ग्रेसबाट दुबै संविधान सभा संसदमा मनोनित भएका थिय। तर यसपाली भने बिबेकशिलको को कारणले उमेदवार भएको काङ्ग्रेस नेता बताउछ्न। समानुपातिक तर्फ ३ प्रदेश संसद जितेको बिवेकशिल साझाले एउटा पनि स्थानीय निकाए जितेको छैन। राष्ट्रिय सभामा विवेकशिलको […]
देशै भरि पानी पर्यो! अनावृष्टि, अतिवृष्टि र खण्डवृष्टि
January 24, 2018 adminLeaveaComment on देशै भरि पानी पर्यो! अनावृष्टि, अतिवृष्टि र खण्डवृष्टि
२०७४ माघ १० काठमाडौं। आज राजधानी काठमाडौं लगाएत देसका बिभिन भागहरुमा बर्षा भएको छ। जाडो याममा परेको पानी ले तत्काज जाडो महसुस भएतापनी छिटो चिसो हट्ने मौसम बिधले जनाए। लामो समय देखि पानी नपरेकोले किसानहरुको तरकारी खेतीलाई प्रभाव परेको र अब केही पानी परेमा तरकारी वारि फस्टाने रानिवनका एक किसान नन्द पासा महर्जनले बताए। धुवाँ, […]
किन जान्छ्न युवाहरु दोहरी र बार?
January 24, 2018 adminLeaveaComment on किन जान्छ्न युवाहरु दोहरी र बार?
२०७४ माघ १० काठमाडौं । बर्तमान समयमा युवा पुस्ताहरु बार र दोहरी धाइरहेका छन। तनाव भुलाउने र मनोरंजन लिने उदेश्यका साथ १६-४० समुहका युवाहरू बार, क्लब अनि दोहोरि जाने गर्छ्न!अर्थोपार्जनको समयमा युवा यसरि लाग्दा ब्यक्तिगत जिबनमा अत्याधिक बेफाइदा हुनसक्छ! अहिलेको परिपेक्ष्यमा युवाहरु बेरोजगारी हुनुको कारण पनि दोहरी र बार धाउने गर्छ्न। अझ कतिपय युवाहरु त […]
सुमार्गिलाइ छुट किन?
January 24, 2018 January 24, 2018 adminLeaveaComment on सुमार्गिलाइ छुट किन?
२०७४ माघ १० काठमाडौं । नेपालकै धनी ब्यक्तिहरु मध्येको एक ब्यक्ती अजय सुमार्गी हुन। उनी माथी संचारमाद्यम ले मात्र होइन जनताले समेत प्रश्न गर्ने गरेको देखिन्छ। फेरि अहिले पनि सम्पत्ती सुदृढीकरण अनुसन्धान बिभागले बिस्तृत आर्थिक अनुसन्धान सुरु गरेको छ। सुमार्गिले बिदेशबाट ल्याएको र ल्याउन खोजेको सम्पती अबैध छ भन्दै अनुसंधान गर्न लागेको हो।
को-को हुन त मुख्यमन्त्रीका दाबेदारहरु
January 24, 2018 adminLeaveaComment on को-को हुन त मुख्यमन्त्रीका दाबेदारहरु
२०७४ माघ १० काठमाडौं । प्रदेशसभा सदस्यको सफत कार्यक्रम प्रश्चा मुख्यमन्त्रीको दावेदार र प्रचार तथा लबिङ सुरु भएको छ। एमाले र बाओबादी गठबन्धनले प्रदेश न.२ बाहेक सबै प्रदेशमा सरकार चलाउने छन। सबै प्रदेश मुख्यमन्त्रीका दवेदारहरु प्रदेश न.१: शेरधन राई र भिम आचार्य ( नेकपा एमाले) प्रदेश न.२: लालबाबु रावत र विजय यादव (फोरम नेपाल) प्रदेश […]
राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्बारी दर्ता आज
January 24, 2018 adminLeaveaComment on राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्बारी दर्ता आज
२०७४ माघ १० काठमाडौं । आज बुधबार राष्ट्रिय सभाको उमेदवारि दर्ता हुँदै छ। सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष अयोधी प्रसाद यादवले बताए। आयोगले उम्मेद्बारी दर्ताको लागि सबै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यलय खडा गरेको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयहरु प्रदेश न.१ बिराटनगर प्रदेश न.२ जनकपुर प्रदेश न.३ पाटन प्रदेश न.४ पोखरा प्रदेश न.५ दाङ प्रदेश […]